i'm not ok unicode - MYSTERY ZILLION
i'm not ok unicode
when i type unicode , i can't use shift keys , exam အဆင်မ ပျေ လို့ ပါ ယ ရစ်
ကို ရိုက် ချင် တာ ပါ ဗွီ ၤြံဲဳဴဓ ဟ ထိုး နဲ့ ယ ရစ် ကို ရိုက် လို့ မရ လို့ ပါ။
ြမန်မာ unicode နဲ့ adobe group(photoshop, illustrator, indesign) မှာရိုက်ချင်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်လဲ။
Ko @chitmoe, သံလွင် font နဲ့ photoshop မှာ သုံးလို့ရပါတယ်။ သံလွင် font ကို
မှာ download ချလို့ရပါတယ်။ သံလွင် သုံးတဲ့ အခါမှာတော့ Text ရဲ့ language ကို အခြား language တစ်ခု ရွေးပေးမှ အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
Ko Saturngod ... thank you very much for your reply, but i use MyanSan Smart unicode, it ok for me. it can't use in abode group.
Myanmar3is not working in Adobe Software. You should try to use Thanlwin for Adobe Software.
reply ပြန် ပေးလို့ ကျေး ဇူး တင် ပါတယ် ကို စေတန် . myansan keyboard နဲ့ အဆင်ပြေနေ ပါ ပြီ။
ကျွန်တော် Folder, File တွေမှာ မြန်မာလိုနာမည်ပေးထားပါတယ်။ ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒါကို Unicode နဲ့ပြန်ပြောင်းရေးချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်လို့ရနိုင်မလဲ သိချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် yunghkio ဖောင့်ကိုသုံးပါတယ်။ ပြီးတော့ Blog တစ်ခုကို Unicode နဲ့ရေးဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။ မြန်မာဖောင့်ရေးတဲ့အခါမှာ ဖောင့်ကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ။ ဇော်ဂျီနဲ့တုန်းက Ctrl + Shit ကိုသုံးပြီးတော့ မြန်မာ + အင်္ဂလိပ် ဖောင့်ကိုပြောင်းသုံးရပါတယ်။ အခု yunghkio ဖောင့်နဲ့သုံးပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် + မြန်မာ ပြောင်းရင် ဘယ်လိုပြောင်းသုံးရပါသလဲ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးကြပါ။
How to use shotcut key to change english font to myanmar unicode in mac os?
for Mac (by default): ctrl+space or cmd+space
cmd+space is correct . thank you so much.
ctrl+space is spotlight in my mac.